‘कटप्पा’को गज्जवको लाइफ स्टाइल -
‘कटप्पा’को गज्जवको लाइफ स्टाइल
एजेन्सी। सुपरहिट फिल्म बाहुबली साएद धेरै ले हेर्नुभएको छ! उक्त फिल्म मा रहेका एक पात्र “कटप्पा” सत्यराज जसलाई दर्शक हरुले कटप्पा भनेपछि चिन्दछन ! उक्त फिल्म का कटप्पा एक चर्चित पात्र थिए ! कटप्पा सत्यराज तामिल फिल्म का चर्चित कलाकार हुन् ! कटप्पा’को भूमि’काले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याए’दियो । उनले थुप्रै बलिउड फिल्म पनि खेलि’सकेका छन् ।
सन् २०५४ मा भारतको तामिलनाडुमा जन्मिएका उनी तालिम चलचित्रका एक चर्चित पात्र हुन् । उनी ‘बाहुबली’ बाट ठुलो दर्शकघेरामा परिचितभए। उनले दक्षिण भारतका तामिल तेले गु, कन्नड, मलयालम भाषाका १३६ फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् । ‘बाहुबली’ सत्यराजको नजरमा अभिनेताका हिसाबले एउटा शानदार भूमिका मान्छन्।उनले सरकारकी कलेजबाट विज्ञानको पढाइ पुरा गरेका थिए । सन् १९७९ मा उनले महेश्वरीसँग विवाह गरेका थिए ।
उनका दुई सन्तानहरु रहेका छन् ।उनले हालसम्म २०० भन्दा बढी फिल्महरुमा काम गसिकेका छन् । उनले तेलुगु, मलेआलम, हिन्दी तथा कनडा फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । उनको पहिलो फिल्म भने सन् १९७८ मा आएको सत्तम इल कायल हो । सन् २०१५ मा आएको बाहुबली फिल्मले उनको करिअरलाई उचाइमा लैजाने काम गर्यो । सन् २०१७ मा रिलिज भएको बाहुबली २ ले उनको भुमिकालाई झनै माथि लैजाने काम गरेको छ ।
फिल्ममा कटप्पाको भुमिकामा देखिएका उनलाई लिएर दुई वर्षसम्म एउटै प्रश्न ‘कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे ?’ फ्यानहरुको मुखमा झुण्डिनै रह्यो ।उनको नेटवर्थ १० मिलियन डलर रहेको छ । उनको चेन्नइमा घर रहेको छ । कारहरुः टोयटा फच्र्युनर– (२८ लाख भारतीय रुपैयाँ) , फोर्ड इनडेभोर–(३० लाख भारतीय रुपैयाँ) र टोयटा इनोभा–(१४ लाख)